Isici esivamile iningi uhlelo lokusebenza kuyinto inkumbulo virtual. Sekuyinto evamile kakhulu ngenxa inani eliphansi ngesikhathi inzuzo enkulu. Ake sibheke ukuthi yini inkumbulo virtual, kanye lapho ukuyisebenzisa?
Okwamanje, amakhompyutha zanamuhla oluvame ukusetshenziswa mayelana eyodwa gigabyte inkumbulo umsebenzi walo. Ngokuvamile, leli nani akwanele i izinhlelo umsebenzi ngempumelelo futhi okusheshayo, befuna inkumbulo virtual. Ngokwesibonelo, uma ngesikhathi esifanayo ukulanda photo ukuhlela lokusebenza Uhlelo ukuxhumana nge-Internet, futhi isiphequluli ngempela awokuthi lokhu inani lememori akwanele, ngenxa yalokho computer angase abe ingasheshi noma kungadinga kuvalwe omunye izinhlelo. Futhi ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi imemori virtual akuyona eziningi, ie kwethulwa ngesikhathi esisodwa izinhlelo eziningi ezahlukene. Kulokhu, umshini ngabe inikelwe ukuqedela Uhlelo lwamanje ukuvula entsha.
Kuyini inkumbulo virtual?
Umsebenzi wakhe silula: computer icinga idatha egcinwe kumemori, kodwa ayisetshenziselwa, bese ubeka kubo kwi drive kanzima. Ingenza kuze imemori virtual elikuvumela ukuqalisa izinhlelo zokusebenza ezintsha kanye nezinhlelo. Le nqubo kwenziwa ngokuzenzakalelayo, kodwa abasebenzisi ngokuvamile musa asiqapheli, kungase kuvele ukuthi kukhompyutha unenkumbulo of usayizi esikhulu, ngisho uma isethiwe wamamegabhayithi 512 kuphela. Uma uhlelo lokusebenza efinyelela isengezo inkumbulo izinsiza kaningi kunokujwayelekile, ithinta ijubane, okungukuthi, uwe esifana kwenzeka nokusebenza.
Ngakho, uma kakade ukuthi yini inkumbulo virtual, okungukuthi ukuthi induduzo yesistimu yokusebenza unganikezwa kuphela kwelinye icala: uma inani lememori efakwe idlula ngo izikhathi eziningana inani lowo njengamanje adingekayo ukusebenza.
Kuthiwani uma i-Windows inkumbulo virtual sesizogcwala? Lokhu uzokutshela ohlelweni lokusebenza itooltip phezu kubha yomsebenzi, okuyinto siyobonisa ukuthi inkumbulo akwanele noma kungcono isizophela. umthamo wayo zingenziwa, uma kunesidingo, ngaphezulu uyena owenza lokhu ifayela eguqulayo, ezingasetshenziswa ukuhlelwa esebenzisa uhlelo lokusebenza uma kwenzeka i-udingeka kangaka.
Ukwanda inkumbulo virtual
ITHOLAKALA KUPHI I-"Control Panel" Ukuze wenze lokhu, uzodinga ukufaka imenyu enkulu, bese uchofoza ku- "System". Esikhathini ithebhu "Okuthuthukisiwe", kufanele uthole le nto "Speed", bese embule iwindi izilungiselelo. Esigabeni nge igama "Memory Virtual" uzobona imemori ekhona okwamanje. Ukushintsha amasethingi engenziwa ngokucindezela "Shintsha". Kudingekile ukubeka kunani kabili inani RAM.
Ngakho, liyini inkumbulo virtual, niyazi, futhi manje-ke kufanele wathi mayelana nendlela ukuyihlanza. Le nqubo kuyadingeka ukuze kulondolozwe ubumfihlo idatha itholakala kufayela lokuvula ikhasi. Lokhu kwenziwa ngokusebenzisa umsebenzi okhethekile, ngokuvamile ivaliwe. Ukuze uyisebenzise, udinga "Control Panel" ukuthola ifolda "Isimiso Sokuqondisa", okuyinto ukuvula "Yemfihlo Ezokuphepha Local". Kulesi ifasitela udinga kuya kwesokudla Chofoza nto "Sula virtual ifayela kwimemori", lapho ukhetha "Properties". Lapho, uzodinga ukusebenzisa inketho "Valiwe", bese uchofoza "Sebenzisa" bese "KULUNGILE". Okulandelayo, udinga kabusha computer kabili, ifayela eguqulayo zizosulwa emva okwesibili.
We ukubuyekeza chip BIOS. Indlela ubuyekeze Asus bios
Ukufakwa ejwayelekile Windows XP
Imisinga kwezilwandle - tenhlangano ukuphila
Art Modern. Ubuchwepheshe obusha kwezobuciko. yobuciko wesimanje
Anna Vyalitsyna: indaba impumelelo kanye biography
Imidwebo njengehlobo lobuciko obuhle: izibonelo
Mishel Kvan - kusukela skater ukuba sobala